Vivo Energy – Shell : ampahafantarina ny fitsitsiana solika | NewsMada
Vivo Energy – Shell : ampahafantarina ny fitsitsiana solika
Vivo Energy, orinasa iray mivarotra solika vokarin’ny Shell eto Madagasikara. Nanomboka, omaly mitohy rahampitso 16 jolay, any Toamasina ny tanàna faharoa nanaovana hetsika fampahafantarana ny vokatra Shell, hanampiana ny mpanjifa ho amin’ny fitsitsiana. Efa natao izany tany Antsirabe, ny volana jona, ary eto Antananarivo, amin’ny faran’ity volana ity. Mampanao fifaninanana ny mpanjifa ny Vivo Energy amin’ny solika amidiny, lasantsy na gazoala, ka homena loka izay tonga amin’ny fitsitsiana, tsy mandany betsaka amin’ny halaviran-dalana 50 km.
Mialoha izany, nomena fiofanana ny lafiny teknika amin’ny fahaizana mitondra hitsitsy solika ny mpamily voafidy amin’ny antsapaka hanao fifaninanana. Nomena fiofanana ihany koa ireo mpamily ireo momba ny aroloza amin’ny fifamoivoizana. Betsaka ny nahita tombontsoa tamin’ny fampiasana solika Shell, nahavita halaviran-dalana betsaka sy nahafahana niaro ny moteran’ny fiarakodia.
Mitovy amin’izay amidy rehetra manerana izao tontolo izao ny amidy eto amin’ny Nosy. 100 taona mahery izao ny nanaovana izany tolotra izany rehefa avy nandalo labarotoara ny fanamarinana ny kalitaony. Nanomboka ny taona 2000 nisokafan’ny toby famatsiana solika Shell eto Madagasikara tantanan’ny Vivo Energy, ahitana toby fivarotan-tsolika miisa 64. Ahitana izany ny firenena 14 any Afrika, miampy an’ny Nosy Maurice sy ny eto Madagasikara.